တခြားလူတွေရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အပေါ်အလေးထားတတ်တဲ့အကျင့်ကို ရပ်တန့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၆ချက်
Home Lifestyle တခြားလူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ထင်မြင်ယူဆ ချက်အပေါ်အလေးထားတတ်တဲ့အကျင့်ကို ရပ် တန့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း၆ချက်
အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုမှု ထောက်ခံမှုကို လိုက်လံရှာဖွေနေတာဟာ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အ ပိုအဆင့်တစ်ခုကို သင်ထည့်နေတာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သင့်ဘ၀အတွက်တစ်ကယ်တမ်း မှတ်ချက်မပေးနိုင်သူတွေကို သင့်ဘ၀ကို စစ်ဆေးခွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကသင့်စွမ်းအားတွေကို အခြားသူကိုပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
သူများတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို သင့်ဘ၀အတွက် အရေးမကြီးခိုင်းပါနဲ့။ သင့်ဘ၀အစီအစဉ်တွေကို အခြားသူတွေက ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်မှာလဲ? နောက်တစ်ကြိမ်မလိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေအခြားသူတွေဆီကတောင်းခံတော့မယ်ဆိုရင် အောက်ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုသတိရဖို့မျှ၀ေပေးလိုက်ပါတယ်။
အစီအစဉ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံဖို့တိုက်တွန်းခံရရင် သင့်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိသူက သင်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာ သတိရပါ။ သင့်နှလုံးသားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့သင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားရဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆို သင်လို အပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအားလုံးကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
အခြားသူတွေကလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀လမ်းစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့ကိုသူတို့ မသေချာတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ နောက်ဆုံး သင့်ဘ၀ကိုသင်တာ၀န်ယူဖို့ လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေအကုန် သင့်မှာရှိပါတယ်။
သင့်စိတ်၀ိညဉ်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ဟာ သင်ပါပဲ။ ဒီတော့ဘယ်ကွေ့ရောက်ရင် ဘယ်တက်နဲ့လှော်မလဲ ဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲသေချာသိနိုင်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျောက် သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုက စကြာ၀ဋာကြီးထဲလမ်းလျောက်ဖို့သင့်ကို ညွှန်ကြားပေးနိုင်မှာပါ။
အခြားသူတွေက သင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကအခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်အပေါ်မူတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ အခြားသူတွေဆီက ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေခြင်းကသင့်ကို စိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ဘ၀အစီအစဉ်တွေကိုသူတို့ကသဘောတူချင်မှတူကြမှာမို့ပါပဲ။ သူတို့ကသင်မဟုတ်တဲ့အတွက် သင်ယုံကြည်တဲ့အိမ်မက်နဲ့သင်အမှန်တကယ်လိုချင်တာဘာလဲဆိုတာကို နားလည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင်မျှော် လင့်ချက်၊ အလင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မီးရောင်အဖြစ်ရှုမြင်တဲ့အခါသင့်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့စွမ်းအားကသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာသင်သိလာမှာပါ။
သင့်စိတ် အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ အရာများသို့မဟုတ် လူများကို သင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မပေးသင့်တော့ပဲ သင့်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသင့်စိတ်အတွင်းကလာတာကိုသတိရပါ။ ဒါက အခြားသူတွေကသင့်ကို စိတ်ပျက်စေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သင့်ဘဝ၏အတွင်းအကျဆုံးဆန္ဒတွေကိုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှစိတ်ပျက်အောင် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး လူတွေငြင်းခုံခြင်းအပြင် သင်လိုချင်တာတွေကိုအခြားဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဘယ် လိုအရာတွေနဲ့ကြိုးစားလို့ရလဲဆိုတာ မျက်လုံးရှင်ရှင်ဖွင့်ဖွင့်ပြီး မစဉ်းစားသင့်ဘူးလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တချို့လူတွေကမင်းကိုဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။
အခြားသူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်၊ အတည်ပြုချက် ကိုတောင်းခံခြင်းကအပိုအလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ သင့်ကိုထောက်ပံ့ဖို့အခြားသူတွေကိုအားကိုးမယ့်အစား ကမ္ဘာကြီးထဲခရီးသွားချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ဆိုရင် သွားလိုက်ပါရုံပါပဲ။
သင်က သင့်အစီအစဉ်တွေကိုတော့ အခြားလူတွေကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကပြောပြရုံပါပဲ၊ သင့်ဆုံးဖြတ် ချက်အတွက် ဘယ်သူ့အတည်ပြုချက်၊ ထောက်ခံချက်မှ မလိုပါဘူး။ အချိန်တွေက အဖိုးတန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မင်းနှလုံးသားကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ အခြားလူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သဘောတူညီမှုတွေရယူနေမယ့်အစား သင့်နှလုံးသားအလိုကိုသာလိုက်ပါ။ ဘယ်သူ့မှသင့်အတွက်မလိုပါဘူး။
လူတိုင်းကသင့်ကို အမြဲတမ်းသဘောတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အစီအစဉ်ကိုဘယ်သူမှသဘောမတူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ လူတွေကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက များသောအားဖြင့် သူ့ကိုယ်သူကလွှဲပြီးလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်မှာပါ။
မေးခွန်းက သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး၊ ဘ၀နဲ့ပက်သက်တဲ့သင့်ရဲ့အမြင်တွေ၊ ဘယ်အလုပ်အကိုင်ကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စတဲ့သင့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ သင့်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်မှုက အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းမ ဟုတ်ဘူးလား? သင့်ဘ၀ရဲ့အဓိကကျဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တခြားသူတွေနဲ့သွားညှိနှိုင်းနေရင် သင့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ကယ့်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကို သင်ဘယ်တော့မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးထက် အရေးကြီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို သိဖို့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဥာဏ်ပညာကိုရှာမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာဘယ်သူလဲ၊ သင့်ဘဝကဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုပိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်အ တွင်းစိတ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုနားထောင်ဖို့ နဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ချိန်ညှိဖို့ သင့်ဘ၀ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရဲ့အသံတွေကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မယ့် အချိန်အနည်းငယ်ကိုယူပါ။
တခြားသူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရှာဖွေတတ်တဲ့ အလေ့အထကို ချိုးဖောက်ပစ်ခြင်းက သင့်တာ၀န်အားလုံးကိုတခြားသူတွေထက် သင့်အပေါ်မှာထားလိုက်တာဖြစ်ပြီးသင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုပိုရဖို့လည်း သင်ယူပီးသားဖြစ်စေမှာပါ။
အခြားလူတွေဆီကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာက တခြားလူတွေဘာပြောလာလိမ့်မလဲဆိုတာကို မျော်လင့်နေတာပါပဲ။ သူတို့ကသင့်ကိုသဘောမတူဘူးဆိုရင်လို့သင်တွေးမိမှာဖြစ်ပီးတော့ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ် သင်စိုးရိမ်စိတ်တွေ၀င်လာမှာပါ။
ကြောက်ရွှံခြင်းကသာ သင့်ကိုတားဆီးစေမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကတော့သင့်ကိုလွတ်မြောက်စေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုသင်တစ်ကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပီးသင့်ဘ၀ကိုသင်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရရင် သူများတွေလက်ခံဖို့အတွက်လို အပ်တဲ့အရာတွေကို စွန့်လွှတ်ပစ်ဖို့ သင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လိုအပ်တာကသူတို့လိုအပ်ချက်ပဲမဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေ၊ အသစ်အသစ်သောအရာတွေ,ကိုကြိုးစားမှုတွေ၊ စိတ်ကူးသစ်တွေကိုနား ထောင်တာတွေအတွက် ကြောက်ရွှံဖို့အခြေအနေများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကြောက်ရွှံမှုဆိုတာထင်ယောင်ထင်မှားမှုတစ်ခုပဲဆိုတာကို အမြဲသတိရပါ။
သင်အမှန်တစ်ကယ်မည်သူမည်၀ါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်တွက်ပါ။ သင့်အတွင်းစိတ်နှလုံးကလာတဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ပါ၀ါဟာ တခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေထက်သာလွန်တာကို သဘောပေါက်ပါ။ ကဲ ဒီလောက်ဆို သင့်ဘ၀ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် တခြားလူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်သင့်ပီလို့ သင်သဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်…
Previous articleရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ပိုရင့်သလိုမထင်ရစေဖို့နဲ့ အသားအရေအတွက် အထောက်အကူပြုစေမယ့် အစားအစာများ
Next articleလူအများစွဲစွဲလမ်းလမ်း ‌သောက်သုံး‌နေကြတဲ့ ‌ကော်ဖီက တခြားနေရာတွေမှာရော ဘယ်လိုအသုံးဝင်သေးလဲ